Sikhulu isililo ngokuminza kwephoyisa ebeliyotakula abantu - Ilanga News
Home Izindaba Sikhulu isililo ngokuminza kwephoyisa ebeliyotakula abantu
Sikhulu isililo ngokuminza kwephoyisa ebeliyotakula abantu
Elinye lidilikelwe wumuzi walo lashona
uSergeant Busisiwe Mjwara obengumtakuli
wesifazane U-CONSTABLE Thandazile Sithole odlule emhlabeni ngemuva kokuwelwa yindlu,U-K9 Officer Leah naye ugwilize no-Sergeant Mjwara/figcaption>
UMNDENI wephoyisa eliminze lizama ukutakula abebecwile emfuleni uMsunduzi, uSergeant Busisiwe Mjara (42), ongowase-Thornville, eMgungundlovu, uthi uzomkhumbula ngokuthanda kwakhe ukudansa, uthando abenalo ngomndeni wakhe kanjalo nomsebenzi wakhe.
UMnu Mali Mjara, ongumfowabo kamkhwenyana kaSergeant Mjwara, utshele ILANGA, ukuthi njengomndeni kusenzima ukukholwa nokwamukela okubehlele, njengoba ethe kungathi kuyiphupho nje. Uthe kwabona incazelo abayithole kwabebehambele umndeni wabo bewukhalisa, ikhombisa ukuthi akekho owaziyo ukuthi kwenzakaleni kahle.
“Basitshele ukuthi ungene ema-nzini ezama ukutakula izingane kwangaphela nesikhathi esingakanani washona phansi. Kwabona uma besixoxela kuyabonakala nje ukuthi kabayikholwa le nto abayibonile njengoba uma bechaza bethi kuvele kwangathi kukhona into emsontayo phansi okuyilapho eqale khona ukugwiliza,” kusho yena. Uthi umakoti wakubo bazomkhumbula ngokuthanda ukuhleka nokuzijabulela ngaso sonke isikhathi. Uthe umyeni kaSergeant Mjwara naye oyiphoyisa akakwazi ngisho ukukhuluma ngalesi sigameko. Uveze ukuthi ushiye emhlabeni amadodakazi amabili.
USergent Mjwara, kuthiwa ugwilize nenja u-K9 Officer Leah, abetakula nayo, obesebenza ophikweni lwezinja eThekwini, naye ogcine efa. Lesi sigameko senzeke ngeSonto ekuseni.Ozakwabo bamncome ngokuthanda kwakhe umsebenzi nokuthi bekunguye kuphela owesifazane obenza lolu hlobo lomsebenzi esifundazweni iKwaZulu-Natal. UKhomishana wamaphoyisa kuzwelonke uGeneral Fannie Masemola, ukuqinisekisile ukuthi kunamaphoyisa amabili adlule emhlabeni ngenxa yalezi zikhukhula. Uveze ukuthi ngezikhathi zabo-11h30 ekuseni ngeSonto, uSerge-ant Mjwara ubengomunye wabebesemfuleni uMsunduzi lapho abebezama ukuthungatha khona izidumbu zabathathu abamuke ngasekuqaleni kwesonto.
Uveza ukuthi kuyasolakala ukuthi ube nenkinga abhekane nayo wabe eseyagwiliza. Uthi ube esethathwa ngebhanoyi elinophephela emhlane, waphuthunyiswa esibhedlela esiseduze lapho efike washonela khona. UGeneral Masemola, uveze ukuthi nenja uLeah igwilizile ngemuva kokuzama ukulekelela uSergeant Mjwara obesenkingeni. USergeant Mjwara kuvela ukuthi ubaziwa kakhulu eMgungundlovu namaphethelo njengoba kuphinde kube nguye kuphela owesifazane obesebenza njengeSearch and Rescue Officer. Ezinkundleni zokuxhumana abaningi bakhombise ukuzwelana okukhulu ngokudlula emhlabeni kwakhe, njengoba bebemchaza njengomuntu obekhombisa ukuba nesibindi, ewuthanda umsebenzi wakhe. UBrandon Drinkwater, osebenza ophikweni lwabezimo eziphuthumayo udlulise ukuzwelana nomndeni, ozakwabo nabangane baSergeant Mjwara.
“Ngeshwa kangikwazi ukukhuluma kakhulu ngokwenzekile kodwa ukudlula kwakhe emhlabeni kunzima kakhulu futhi kuyasikhathaza emoyeni,” kusho yena. AbeMerG-Med bakhalisane nomndeni wakhe bathi yena no-K9 Officer Leah banikele ngempilo yabo kuleli lizwe njengoba befele emsebenzini. “Siyabonga kunina nobabili ngokusebenza ngokuzikhandla. Imicabango yethu inomndeni wenu nabangane,” kusho bona. UGeneral Masemola uthe alinganiselwa ku-30 amaphoyisa athintekile ngemuva kokuhlasela kwezikhukhula, wathi amanye alimalile, kwathi amaningi alinyalelwa yimizi. Ngaphandle kukaSergeant Mjwara, uConstable Thandazile Sithole, naye ulahlekelwe yimpilo yakhe ngemuva kokudilikelwa ngumuzi wakhe ngasekuqaleni kwesonto.
Previous articleUmyeni uboshwe eyolobola
Next articleUfuna imali yakhe obondliswa ‘ibhantshi’